Ethereum Classic စျေး - အွန်လိုင်း ETC ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Ethereum Classic (ETC)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Ethereum Classic (ETC) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Ethereum Classic ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $953 860 950.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Ethereum Classic တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Ethereum Classic များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
Ethereum ClassicETC သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$19.27Ethereum ClassicETC သို့ ယူရိုEUR€15.99Ethereum ClassicETC သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£13.86Ethereum ClassicETC သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.17.64Ethereum ClassicETC သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr160.47Ethereum ClassicETC သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.118.93Ethereum ClassicETC သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč413.31Ethereum ClassicETC သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł72.85Ethereum ClassicETC သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$24.1Ethereum ClassicETC သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$24.88Ethereum ClassicETC သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$384.31Ethereum ClassicETC သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$149.55Ethereum ClassicETC သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$107.34Ethereum ClassicETC သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹1446.07Ethereum ClassicETC သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.2953.44Ethereum ClassicETC သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$25.59Ethereum ClassicETC သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$26.82Ethereum ClassicETC သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿604.16Ethereum ClassicETC သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥125.06Ethereum ClassicETC သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥2081.82Ethereum ClassicETC သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩21524.76Ethereum ClassicETC သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦7347.27Ethereum ClassicETC သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽1468.62Ethereum ClassicETC သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴539.78
Ethereum ClassicETC သို့ BitcoinBTC0.000341 Ethereum ClassicETC သို့ EthereumETH0.00959 Ethereum ClassicETC သို့ LitecoinLTC0.0864 Ethereum ClassicETC သို့ DigitalCashDASH0.0743 Ethereum ClassicETC သို့ MoneroXMR0.073 Ethereum ClassicETC သို့ NxtNXT316.44
Ethereum ClassicETC သို့ DogecoinDOGE320.49 Ethereum ClassicETC သို့ ZCashZEC0.111 Ethereum ClassicETC သို့ BitsharesBTS167.62 Ethereum ClassicETC သို့ DigiByteDGB240.89 Ethereum ClassicETC သို့ RippleXRP20.58 Ethereum ClassicETC သို့ BitcoinDarkBTCD63736468.3 Ethereum ClassicETC သို့ PeerCoinPPC19.73 Ethereum ClassicETC သို့ CraigsCoinCRAIG842673266322.41 Ethereum ClassicETC သို့ BitstakeXBS7.76 Ethereum ClassicETC သို့ PayCoinXPY7708.61 Ethereum ClassicETC သို့ ProsperCoinPRC1927153594.14 Ethereum ClassicETC သို့ YbCoinYBC0.0107 Ethereum ClassicETC သို့ DarkKushDANK592992298523.22 Ethereum ClassicETC သို့ GiveCoinGIVE4002698015031.8 Ethereum ClassicETC သို့ KoboCoinKOBO1484.29 Ethereum ClassicETC သို့ DarkTokenDT17.75 Ethereum ClassicETC သို့ CETUS CoinCETI266846534335.52
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Thu, 22 Apr 2021 11:20:01 +0000.